कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यी उपाए - ज्ञानविज्ञान
Topics #उपाए #कपाल
Don't Miss it कसरी हटाउने नाकको ब्ल्याक हेड्स ?
Up Next के डरलाग्दो सपना देख्नु हुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ बास्तु दोष
मृत्युपछि शरीरका अंगहरु चल्छन ! सबैले जानी राख्नु पर्ने कुरा
मृत्युपछि शवको प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा वेलावखतमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यहार हुने र अस्पतालमा तोडफोड हुने गरेका छन् । चिकित्सकले मृत घोषणा…